सरकारले थाल्यो फेरि लकडाउन गर्ने तयारी ! यी क्षेत्र बन्द गर्न निर्देशन – Khabaarpati
October 16, 2020 October 16, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on सरकारले थाल्यो फेरि लकडाउन गर्ने तयारी ! यी क्षेत्र बन्द गर्न निर्देशन
सुवेदीको नेतृत्वमा श’ल्यक्रिया मार्फत बिहान मृ,त सहित ५ शिशुको जन्म भएको हो । अहिलेसम्म आमाको अवस्था पनि सामान्य नै रहेको उनले बताए । जीवित शिशु चार छोरी छन्। मृतक शिशु भने छोरा थिए। उनको तौल ३०० ग्राम मात्र थियो । अपरेसनमा संलग्न चिकित्सक कृतिपाल सुवेदीका अनुसार चार शिशु र आमा सबै स्वस्थ छन्। ती शिशु १.८, १.९, १.६ किलोग्राम र ८०० ग्रामका छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **